नेप्से सिईओका लागि ११ जनाबाट पाँच जना छनौट, कसले मार्ला बाजी ? - Aarthiknews
नेप्से सिईओका लागि ११ जनाबाट पाँच जना छनौट, कसले मार्ला बाजी ?
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज(नेप्से)को प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सिईओ) छनौट सिफारिस समितिले लागि पाँच जनाको नाम सार्वजनिक गरेको छ । ११ जना आवेदकबाट पाँच जनाको नाम विहीबार मन्त्रालयको वेवसाइटमा सूचना प्रकाशित गरेको छ । विहीबार सार्वजनिक गरेको सर्टलिष्टमा कृष्णबहादुर कार्की, डा. केशबप्रसाद श्रेष्ठ, प्रविन पन्दाक, रमेश घिमिरे र डा. रमेश भण्डारीको नाम सार्वजनिक गरेको हो ।
छनौट समितिले सार्वजनिक गरेको सूचिमा रमेश घिमिरे एनसेलमा कार्यरत कर्मचारी हुन भने कृष्णबहादुर कार्की शेयर बजारमा नयाँ व्यक्ति हुन । त्यस्तै डा. रमेशकुमार भण्डारी शेयर बजारसँग सम्बन्धीत लामो समयसम्म काम गरेका व्यक्ति हुन ।
प्रविन प्रन्दाक नेप्सेमा नै कार्यरत कर्मचारी हुन । त्यस्तै, डा. केशवप्रसाद श्रेष्ठ शेयर बजारका प्रशिक्षकका रुपमा चिनिन्छन् । बजारमा भने रमेश घिमिरेको नाम चर्चामा रहेको छ । उनी भारतीय सरकारको बैंक एसविआइ बैंकमा समेत काम गरिसकेका भएकाले ठूलो शक्तिकेन्द्रका छायाँ उनीमा रहेको चर्चा रहेको छ ।
नेप्सेमा प्रमुख कार्यकारी अघिकृत बन्नका लागि नेप्सेका कर्मचारी निरन्जन फुयाल र प्रविण पन्दाक, डा जिवन अम्गाइ, डा केशव श्रेष्ठ डा रमेशकुमार भण्डारी, बद्रिप्रसाद प्याकुरेल, कृष्णबहादुर कार्की, दिपक गौतम, गोविन्द प्रसाद दाहाल, छविराज पन्त र रमेश घिमिरे गरि ११ जनालले आवेदन दिएका थिए ।
नेप्सेका तत्कालिन सिइओ चन्द्रसिंह साउद सर्वोत्वम सिमेन्टको इन्साइडर कारोबार काण्डमा मुछिएपछि राजीनामा दिएपछि उक्त पद खालिरहेको छ ।